Semalt: Iintlanu ezintlanu zokuvimbela ukuthumela iSpam Traffic kwi-WordPress usebenzisa i-Plugin
U-Ivan Konovalov, u-10 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi i-Wordpress ineenombolo ezininzi zeeplagi ezikunceda ukukhusela okanye ukuvimba ugaxekile wokuthumela ugaxekile. Ngelishwa, i-spam yokubhekisa iyindlela ephuculayo yokuphucula indawo yewebhusayithi kwiziphumo ze-injini yokusesha. I-Hackers kunye ne-spammers baqhubeka befuna iindlela zokwandisa i-website yabo yezithuthi, ukukhangela injini yokubonakala, kunye nokuthembeka kwezebhizinisi. Kule nto, basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokuthumela i-spam. Siyathokoza, sinemithwalo yeeplagi ze-WordPress ezithintela ngokukhawuleza okanye ngokusisigxina umxholo wogaxekile. Kuthetha ukuba indawo yakho ye-WordPress ayiyi kufumana i-fake traffic kunye nabahlaseli abayi kukwazi ukuvelisa imali ngenjongo yokuqhagamshelana ne-site yakho - crocodile leather hats. Kwakhona, abayi kukwazi ukufikelela kwigama lakho lomsebenzisi kunye nephasiwedi, kwaye abakwazi ukukhohlisa ii-akhawunti zakho ze-Google Analytics.
njani ukususa i-malware okanye yokuthumela i-spam kwiwebhusayithi yeWindowsPress?
Kwi-WordPress Plugins directory, iiplagi ezininzi zingasetyenziselwa ukunqanda i-traffic spam. Zonke iifowuni zefayile ze-WordPress ezithumelayo zineenkcukacha ezithile, iimpawu kunye neempawu. Bancedisa ukuvimba amagama egama enesigxina kwinani elikhulu. Abaphathi beWebhsayithi banokubeka iliso zonke iindawo zokuthunyelwa kogaxekile kunye nokuphucula izinga labo.
Iindlela zokuthintela ugaxekile logalelo okanye ukuthunyelwa kwendlela yokusetyenziswa kogaxekile usebenzisa iifowuni:
Inyathelo 1: Hlela izicwangciso kwideshibhodi yakho:
Ukuba uphuhliso lwewebhusayithi usebenzisa i-WordPress, kufuneka uhambe kwicandelo le-Admin uze ufumane indawo eneefowuni ezifakweyo zokukhusela umyalezo wogaxekile. Qinisekisa ukuba ukhethe i-plugin enegama elihle kwaye ihlaziywe ngabantu abaninzi.
Isinyathelo 2: Faka kwaye usebenze:
Emva kokuba i-plugin ifakiwe kwiwebhusayithi yakho ye-WordPress, kufuneka uyisebenze ngokusebenzisa izicwangciso -> Ukhetho lwesikhokelo sobume be-Spam Referrer kwaye ungakhohlwa ukuyilungisa njengemfuno yakho kunye nesimo sendawo.
Inyathelo 3: Lungiselela i-plugin
Kwinqanaba lomlawuli kwiwebhusayithi yakho ye-Wordpress, uza kubona ezinye iindlela zokuqwalasela iifowuni zakho. Ezi zikhetho makungavimbela ii-IPs ze-spamm, kwaye ukutyelela okanye ukuhlaselwa kwazo kuya kuhanjiswa kwii-URL eziqhelekileyo.
Isinyathelo 4: Yakha izizinda:
Kwimimiselo yoqwalaselo lweWindowsPress yakho, i-plugin iya kunika ithuba lokudala iindawo eziqhelekileyo. Ukuba ukholelwa ukuba i-plugin ayikwazi ukuvimbela ngokufanelekileyo ugaxekile we-referam kunye nemimandla enokukrokra, ungongeza i-URL ngesandla ukuze uqinisekise ukhuseleko lwendawo yakho. Unokufumana uluhlu olupheleleyo lweewebhusayithi ezisolisayo kwi-akhawunti ye-Google Analytics okanye kwiifom ze-intanethi.
Inyathelo lesi-5: Uluhlu olubanzi lweenkcukacha zogaxekile:
Kwiinkqubo ze-Plugin's Settings, ungabona uluhlu olubanzi lwegama lesiqhelo se-spam kwaye unokubamba bonke ngokufanayo, ugcine ixesha elide. Izintlu ezihlaziywayo zingaphinde zilayishwe kwi-intanethi okanye kwi-server yakho. Ukuba ufuna ukukunceda nokwabelana uluhlu lwe-intanethi, kufuneka uqale kuqala uluhlu lwabantu abamnyama kuzo zonke iipoleni ukwenzela ukuba bangagcini ukuthumela ukutyelela okuvela kwi-intanethi yoluntu. Cofa kwiqhosha le-Layout Server kwaye ugcine izicwangciso zakho ze-plugin.
Yiyiphi iplagi efanelekileyo kuwe?
I-plugin ye-Block Referrer Spam iplagi iyona nto ibhetele kwaye enye yeeplagizi ze-WordPress ezipholile kakhulu. Ungayifaka kwi-plugin ye-Wordpress isiqulatho uze usebenze ngokukhawuleza. I-Auto Save Yakho okanye i-Auto Update inketho inceda uhlaziye ngokuzenzekelayo amagama e-spam wesizinda ngokuzenzekelayo.